I-pokémon go: yonke into ekufuneka uyazi ukuqala njengomqeqeshi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Pokémon GO: yonke into ekufuneka uyazi ukuqala njengomqeqeshi
I-Pokémon GO: yonke into ekufuneka uyazi ukuqala njengomqeqeshi
Ndiziva ngathi ii-90s ziphinde zabuya ngokufika kwePokemon GO kwi-Android nakwi-iOS. Abantu banemincili ngePokemon ngokungathi akukho ndawo bahlala kuyo ixesha elide, elide. Sele sichazile uyifumana njani i-Pokemon GO kwisixhobo sakho, nokuba uhlala phi , Kwaye ngoku siza kuhamba ngaphezulu kwezinto ezisisiseko ze-AR yokudlala.
Okokuqala, umhlaba wePokemon GO awufani nento oyilindeleyo kumdlalo ovela kuthotho, kuba, ewe, iyenzeka kwilizwe lokwenyani. Ngokufana ne-Ingress, i-Pokemon GO yindawo esekwe kwindawo ye-AR esebenzisa indawo yakho yokwenyani, kwaye etshintsha yonke into. Akukho ziqubu zodibana nazo umzekelo, oko kuthetha ukuba ungahamba ngokukhululekileyo ujikeleze ingca ende ngelixa uncanyathiselwe kwifowuni yakho & apos;
Ukungena kwisiqwenga sengca ende akuyi kuphumela kwi-Pokemon yasendle ekulalele ngeli xesha, kodwa wena & amp; d usengcono jonga inyathelo lakho
Izilo zasendle aziyi kuphumelela kuwe kwi-Pokemon GO, njengoko ungadingi ukulwa nazo ukuze uzibambe. Ngeli xesha, izidalwa zasendle zinokubanjwa ngokujula nje iiPokeballs kuzo. Izinto azilula kangako, ewe, njengoko kufuneka uzenzele i-Pokeballs kwaye uluhlu lwakho lukhawulelwe. Ngethamsanqa, iRazz Berries ekhethekileyo inokusetyenziselwa ukwandisa amathuba akho okubamba abantu abancinci ngaphambi kokuba babaleke. Akukho banye abaqeqeshi abaza kuhlazisa kwikona nganye, esicinga ukuba sisigqibo esifanelekileyo kolu hlobo lomdlalo, kungenjalo uya kunyanzelwa ukuba uyeke onke amanyathelo amahlanu. Amadabi kwiPokemon GO aqulathwe kuphela kwimithambo ekhethekileyo.
I-PokeStops ngamanqaku anomdla apho unokufumana khona izinto eziluncedo Xa usenza umqeqeshi wakho ngokwezifiso kwaye ukhethe i-Pokemon yokuqala, jonga imephu yakho. Naziphi na ii-icon zeblue onokuthi uzibone macala onke kuwe zibizwa ngokuba yiPokeStops. Zihlala zibekwe kufutshane neempawu zomhlaba wokwenyani, izakhiwo ezibalulekileyo okanye ezinye iindawo ezibalulekileyo. Ukuba awuboni nayiphi na into, kunokuba ngumbono olungileyo ukuphakama uhambe ujikeleze kancinci. Yile nto yenqaku lalo mdlalo, ngapha koko. Ukusondela kwiPokeStop kunye nokuswayipha kuyo kuya kuvelisa izinto zasimahla kunye namava amanqaku ngamanye amaxesha. Oku kuyakujika i-PokeStop icon emfusa, okuthetha ukuba iphelile okwangoku, kodwa iya kubuyela kublue emva kwexesha. Yindlela & apos; ukufumana njani izinto simahla.
Njengawo nawuphi na umdlalo okhululekileyo wokudlala, iPokemon GO ikuvumela ukuba uthenge izinto ngemali oyisebenzele nzima
Izinto ezikumdlalo zinokufunyanwa simahla kodwa, ngokwendalo, oku kuthatha ixesha elingaphezulu kunokuzithenga ngemali yokwenyani. Ukuthengwa kwenziwa ngemali engaphakathi komdlalo ebizwa ngokuba yiPokeCoins (PC), enokufunyanwa ngokudlala umdlalo, nangona kunqabile, okanye kuthengwe ngemali yokwenyani.
Izinto ziyinxalenye ebalulekileyo yePokemon GO, njengoko zihlala zikho kuthotho lwe-RPG ephambili
Ngoku ukuba uyazi ukuba ungazifumana phi na izinto ozifunayo, masijonge ukuba zeziphi iintlobo zezinto ezikhoyo kumdlalo nokuba zibiza malini.
Iipokeballs zezona zinto zibalulekileyo kwindalo yePokemon kwaye uya kunikwa ama-50 ukusukela ekuqaleni komdlalo. Okungakumbi kunokufunyanwa ngokukhangela iPokeStops okanye ukuzithenga kwivenkile. Zithengiswa ngeepakethe ezingama-20 (100 PC), 100 (460 PC) kunye nama-200 (800 PC).
Amaqanda ePokemon anokufumaneka endle kwaye aqanduselwe nge-Egg Incubator. Amaqanda aqandusela akuba umdlali ahambe umgama othile kwaye avelise iPokemon entsha.
Ngokungafaniyo namaqanda aqhelekileyo, amaqanda anethamsanqa anokuthengwa aphindaphinda amanqaku amava owafumanayo kangangemizuzu engama-30. Zingathengwa njengezinto enye kwi-80 PC okanye kwiibhetshi eziyi-8 (500 PC) kunye nama-25 (1250 PC).
Uqala nge-Egg Incubator enye kuphela, ethintelwe kwiqanda elinye kuphela ngexesha, kodwa isebenzisa ngokungenamda. Ungathenga ii-Incubators ezongezelelweyo kwivenkile, kwi-PC eyi-150 isiqwenga, esibambe ukuya kumaqanda amathathu ngexesha, kodwa zilungele ukusetyenziswa kathathu kuphela.
Isiqhumiso sisetyenziselwa ukufihla iPokemon. Yonyusa izinga kuwe lokufumana izidalwa endle kangangesithuba semizuzu engama-30. Isiqhumiso sithengiswa evenkileni njengenye into (i-80 PC) kunye neepakethe ze-8 (500 PC) kunye ne-25 (1250 PC).
Iimodyuli zokuhenda zitsalela iPokemon kwindawo ethile yePokeStop. Zisebenza ngakumbi kuneziqhumiso kwaye zichaphazela bonke abadlali abajikeleze iPokeStop ethile kangangesithuba semizuzu engama-30. Zingathengwa kwivenkile njengenye into (i-100 CP) okanye ipakethe ye-8 (680 PC).
Ugcino lwakho lokuqala lwePokemon likuvumela ukuba ugcine amaqanda angama-250 ePokemon kunye namaqanda angama-9 ePokemon. Ukugcinwa kunokuhlaziywa kunye neendawo ezingama-50 ezongezelelweyo kwi-50 PC.
Njengoncedo oluyimfuneko kuye wonke umqeqeshi wePokemon, iBhegi yakho ikuvumela ukuba ugcine zonke izinto ozifumanayo ngexesha lokuhamba. Inendawo ezingama-350 zasimahla kwasekuqaleni kwaye inokuhlaziywa ngokunyuka kwama-50 kwiindawo zokubeka ezingama-50 kwiPC nganye.
Amaqela, iiGyms, ukukhusela udumo lwakho kunye nokunye
Nje ukuba wenze inkqubela phambili eyaneleyo kwiPokemon GO, uya kucelwa ukuba ujoyine elinye lamaqela amathathu afumanekayo: Bomvu, Luhlaza noBomvu. Nje ukuba ujoyine iqela, uya kuba nakho ukuqhuba eyakho iGym kwaye unike iPokemon ukuyikhusela. I-Gym nganye inenqanaba lodumo, ngokusekwe kumava eqela eliyibambayo, kwaye ungacela umngeni kwiiGyms zotshaba.
Emva kokuba woyise bonke abaqeqeshi kwiGym yotshaba, uyakugxothwa, kodwa ugcine umceli mngeni kwiGym ukuze uyikhuphe ngokupheleleyo. Nje ukuba wenze oku, uya kuyithathela indawo kwaye ube yiNkokeli yeGym. Unokwabela iPokemon ukuba ilinde iGym. Qiniseka nje ukuba usebenzisa i-Pokemon enezinto ezaneleyo zokulwa (i-CP) ukulwa nabachasi beentshaba.
Ngeli xesha, i-Pokemon ayibekwa ngokwenqanaba, kodwa yi-CP. I-CP inokunyuswa ngokunika i-Pokemon Stardust kunye nePipi yakho, oyifumana ngokubamba izidalwa endle, ukuqandusela ezintsha okanye ukuzidlulisela. Ipipi ithe ngqo kusapho ngalunye lwePokemon, ngenxa yoko ayinakusetyenziswa nakweyiphi na into yakho enkulu, ngelixa iStardust indalo iphela kwaye inokusetyenziselwa ukomeleza nayiphi na Pokemon yakho.
Yiyo evela kuthi ngoku, ndiyathemba ukuba usithandile isikhokelo sethu sokuqala kunye neapos kwiPokemon GO! Ngoku, phuma uye uqalise ukugcwalisa loo Pokedex!
Khuphela i-Pokemon GO:
Ivenkile yeGoogle Play Ivenkile yeApple
Umhla wokukhutshwa kwesamsung galaxy s6
Iifoto zikaGoogle zazisa ifolda evaliweyo ukufihla iifoto zakho ezibuthathaka
I-Niantic ijika i-Pokemon YIYA kwi-Pokemon STOP kwabo baneselfowuni
I-Verizon & apos; s inethiwekhi ye-4G ivele ngokukhawuleza kunaleyo ye-5G